Flower wholesales market in Yangon - Yangon Thu Michelle Video
Activities, Places and landmarks, Video Sep 14, 2018
စျေးနာမည်က ငမိုးရိပ်စျေးထင်တာပဲ။ ဆိုင်သိပ်မများပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးက ပန်းဆိုင်တွေချည်းပဲ။ တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံးရောင်းတယ်။ အစည်ဆုံးကတော့ မနက်သုံးနာရီ …။တောင်ကြီး၊မေမြို့၊မန်းလေးစတဲ့နေရာအစုံကပန်းပို့တဲ့ကုန်ကားတွေဝင်လာပြီ။မနက်ခင်းစောစောဝယ်ဖြစ်ရင်လတ်ဆတ်နေမှာပဲ။
တစ်ခုရှိတာမီရှဲဝယ်တဲ့အချိန်ကညနေသုံးနာရီဆိုတော့သိပ်မရွေးတတ်တာနဲ့ပန်းနွမ်းတာတွေနဲ့ရောထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဂျင်းမိသွားတယ်။သတိထားပြီးတော့ဝယ်ပါ။အထဲဆိုင်တွေလဲဝင်ကြည့်ကြည့်။ဘာတွေရောင်းလဲသိရအောင်။များများယူရင်စျေးသက်သာတယ်။နှင်းဆီရောင်စုံ လေးတွေကမယူပဲနေမလို့ပဲ။ဒါပေမယ့် မနေနိုင်လို့ဝယ်မိသွားတယ်။
ပန်းလက်ဆောင်ပေးရင် အစည်းလိုက်ကြီးက ဘယ်လှပါ့မလဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ စဉ်းစားကြည့်တာ ပန်းစည်းနဲ့ ပန်းဘူးဆို ဘယ်ဟာပိုလွယ်မလဲပေါ့။ ပန်းစည်းကတော့ စည်းတဲ့နည်းတွေက Youtube မှာလိုက်တော့ကြည့်တာပဲ။ဆရာမပြနည်းမကျတော့ဆရာလိုတယ်။တခြားပတ်ရတဲ့စက္ကူ၊ဖဲကြိုးဘာညာဝယ်ရမှာနဲ့လိုတဲ့ပစ္စည်းကပန်းညှပ်ကတ်ကြေးကလွဲပြီးဘာမှမရှိတာနဲ့ပန်းဗူးကိုပဲရွေးလိုုက်တယ်။
လိုသလောက်ပဲဝယ်ရင်တော့ အဲ့ဒီလောက်မကျဘူးပေါ့။ တစ်ခါတလေ ပိတ်ရက် ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲ တွေးနေရင် လုပ်စရာတခုရတာပေါ့။ တခြားအကျိုးမရှိတာတွေလုပ်မယ့်အစား ပန်းတွေလှအောင်လုပ်နေရတာ စိတ်ကြည်နူးစေတယ်။ စိတ်ကိုပျော့ပြောင်းနူးညံ့စေတယ်။ (ပန်းမကြိုက် အမှိုက်ရှုပ်တယ်ထင်တဲ့လူမပါ)။ ထိုးထားတဲ့ ပန်းအိုးတွေရှိရင်လည်း ပြပါဦး….
Flower shops near my apartment is feel expensive to buy. That’s the reason I am browsing some information from Internet and asking my friends, where to buy flowers in cheap. As one of my friend’s suggestion, there isabig flower wholesales market in Yangon. This video is dedicated to people who want to buy flowers in cheap and resellers or bouquet makers.
The market name is Nga Moe Yeik, located at the junction of Pyi Htung Su flyover and Than Thu Mar Street, Thingankyun Township, Yangon. This is not quite big but all shops selling thousands of flowers. Better go to there at the early morning before reseller shops come and buy.
I am planning to give the flowers in flower box. I would like to share some tips and tricks how do I make flower box step by step in this video as well.